Toerana Eto An-Tany Izay Misy Ny Tsy Fisian Ny Olona
Te-manitrika an — Paradisa an-trano ny an-jatony maimaim-poana ny olon-tiany ny vehivavy. Avy eo dia mandehana amin’ny fitsidihana ny tanàna avy amin’ny lahatsoratra. Tsy manolotra ho any amin’ny lalana iray mba hijery ny tanàna manodidina an’i Afrika hatraiza hatraiza. Amin’ny fahatongavany ao amin’ny mafana kaontinanta tokony handeha ny iray amin’ireo tanàna ny olona ny Toaregy. Ny foko monina any Alzeria, Niger, Mali sy ny hafa ny tanàna, ka ny fikarohana dia tokony hitsangana. Ny lehilahy dia azo antoka mba hisarihana ny kolontsaina ny olona, Touareg ny ankizivavy dia tsy ho saro-kenatra. Tsy mety mamaly ihany no afaka manambady vehivavy, ary ny sisa dia foana ny mitady vaovao mpankafy. Ny zava-misy fa ny laza ny vehivavy Toaregy dia tapa-kevitra araka ny isan’ny tia amin’ny hatsaran-tarehy. Saro-kenatra virjiny ao amin’ny foko dia tsy nanan-tarehy, misy miroborobo looseness. Raha mbola mitady ny tsara indrindra sy ny malala, pack ny zavatra rehetra sy handeha ho any amin’ny tanàna Afovoany Brezila. Ny toe-javatra toa mahafinaritra, fa any Ivanovo an-trano efa ho im-betsaka ny vehivavy noho ny lehilahy. Nitsangantsangana ny alalan ny Valan-javaboary sy ny nahita ny mahafatifaty vehivavy tanora iray, dia afaka mahazo mahalala ny tsy misy isalasalana.
Any Ivanovo foana ny olona sambatra, satria ny tovovavy vonona ny tenany ho any amin’ny sisin’ny ny izao tontolo izao mitady Mr marina. Saika mitovy ny toe-javatra mitranga ao Kursk, Perm sy Yaroslavl. Raha tsy Ivanovo ny tanàna ny nofy, dia afaka misafidy amin’ny maro samy hafa tari-dalana.
Foana ny te-handeha any ivelany
Ny renivohitr’i Hongria dia safidy lehibe ho an’ny nandeha, raha mandeha irery. Ao Budapest ny toe-draharaha dia tsy mba matsilo toy ny any Ivanovo, fa ny hoe ny vehivavy mponina rehetra mbola predominates ny lahy. Fara-fahakeliny amin’ny tsara tarehy toy izany tanàna dia foana ny toerana iray dia afaka manasa ny vehivavy noho ny tantaram-pitiavana fivoriana. Ankizivavy ao amin’ny renivohitr’i Hongria bebe kokoa noho ry zalahy, izay maminany mahomby diany. Eo mahagaga Nosy, nanasa ny ranon ny oseana Pasifika, tsy manam-bady ny lehilahy foana no handany fotoana tsy hay hadinoina fotoana. Ankoatra izany, maro ireo tokan-tena dia afaka mandehana an-trano amin’ny maha-te ho tia namana. Namana tovovavy mandray vahiny amin’ny fifaliana, noho ny mponina amin’ny faritra Avaratry ny Nosy Mariana dia nanjakazaka tamin’ny namany ny malemy kokoa ny firaisana ara-nofo. Ny fihanaky ny sokajin-taona ny tsy manam-bady ny vehivavy eto dia tena maro, ny mpitsidika manana ny fahafahana nihaona tamin’ny vehivavy iray avy valo ambin’ny folo dimy amby enim-polo taona.
Ny matsiro indrindra dia nanapa-kevitra ny hiala tamin’ny farany
Ao amin’ny iray amin’ireo tanàna Breziliana, misy vondrom-piarahamonina iray antsoina hoe Noiva manao Cordeiro, izay vehivavy miaina irery. Ny ponenana dia ahitana ny mba ny vehivavy, indrindra izay dia tsy mifatotra ao amin’ny Fanahy fanambadiana ara-pinoana. Vadiny ary ny zanany lahy dia nanambady vehivavy tanora miasa ao Breziliana hafa ny tanàna, ka misy trano tena mahalana. Azonao sary an-tsaina mangetaheta ny fomba tokana ny vehivavy amin’ny lehilahy ny saina. Tsy ela akory izay, ny vehivavy niantso ny solontenan’ny kokoa ny firaisana ara-nofo ny alalan ny asa fanaovan-gazety amin’ny fangatahana mba hifindra Noiva manao Cordeiro ho fonenana maharitra. Ny vehivavy dia nanamarika fa faly izy ireo mba handray ny vahiny ho fanombohana tantaram-pitiavana fifandraisana. Izany no toerana tsy mampino ny tantara sy maro loko ny endriky avy manerana izao Tontolo izao. Isika hiray hina toy ny-tsaina ny olona, izay akaiky ny fitsipika ao amin’ny sehatry ny tombontsoan’ny fiaraha-monina
← Hihaona amin'ny olona ny fitiavana sy ny fifandraisana, amin'ny zodiaka famantarana Leo. Tsy misy fisoratana anarana. Tena sary
Amin 'ny fiainan' ireo olona ao Brezila, indrindra fa ny fomba ny velona →